केन्द्रीय समितिक ९९ सदस्यीय बनाउने ओली-प्रचण्ड सहमति ! पोलिटव्यूरो र स्थायी समिति सदस्य कति ?::Pathivara News
काठमाडौं, २ फागुन एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति ९९ सदस्यीय बनाउन सहमत भएका छन् ।
अंग्रेजी दैनिक पत्रिका द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड २ अंकको केन्द्रीय समिति बनाउन सहमत भएका हुन् ।
पार्टी एकीकरण र सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न एमाले–माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ ।
दिउँसो दुई बजेपछि समितिको बैठक बस्ने स्रोतले जनाएको छ । संयोजन समितिको बैठक बस्नु अगाडि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पुनः भेटवार्ता हुने बताइएको छ ।
पार्टी एकीकरणका लागि नजिक पुगेका ओली र दाहालले संयोजन समितिबाट सो विषयलाई टुंग्याउने पक्षमा देखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार वैचारिक र सांगठनिक विषयमा सहमति जुटाउन संयोजन समितिले दुईवटा कार्यदल बनाउने तयारी समेत भएको छ ।